China tsofa lavaka, fandavahana lavaka, tsofa lavaka vy, fitrandrahana karbida vita amin'ny simenitra, lozika vita amin'ny firaka vy UNIKA ary orinasa mpamokatra | Boda
Tsofa loaka, fantsakan-lavaka, tsofa vy vy, fitrandrahana karbida simenitra, tsofa lozika vita amin'ny vy vita amin'ny vy vy UNIKA
Sombin-tsofa borosy BOSENDA avo lenta / fantsom-pohy boribory tadin'ny vy izay manapaka vy toy ny fotaka, miaraka amin'ny maranitra sy mateza ary avo lenta ary koa fanokafana haingana, mitondra fanoherana mahery vaika amin'ny fikarakarana.
Miaraka amin'ny haitao mandroso, sy ny lohan'ny fanapahana lohateny, izay miteraka fanoherana kely fanapahana sy fahombiazan'ny fisokafana avo mandritra ny fizotran'ny asa. Fitrandrahana fametahana afovoany afovoany, fametrahana tsara alohan'ny fandavahana, izay miantoka ny fahamendrehana, fandavahana haingana sy mahomby mandritra ny asa. Manatsara ny famolavolana ny alàlan'ny fanesorana puce mba hiantohana ny fanesorana ny puce sy hampiala tsara ny fanakanana ny fako. Ny tahona triatra anti-slip, mitazona mafy amin'ny fizotran'ny asa, tsy mora solafaka, manome fiarovana sy antoka azo antoka amin'ny fizotran'ny asa.
Ny mpanokatra ny lavaka karbida vita amin'ny simenitra dia afaka mamoaka lavaka amin'ny lovia vy tsotra, lovia vy, firaka vy ary vy vy. Ny hatevin'ny takelaka fanapahana dia 5mm, ary ny sisin'ny fanapahana dia vita amin'ny alimina tungsten, kobalta ary vanadium avo lenta. Izy io dia afaka manapaka ny karazana metaly tsy ferrous, metaly mainty ary tsy metaly, indrindra ho an'ny vy mangatsiaka sy mafana ary vy tsy misy fangarony.
Ny BOSENDA dia mety hampiasaina amin'ny fandavahana vy vy, vy-vy, firaka aliminioma ary fitaovana metaly tsy vita amin'ny fenitra samihafa.
Famaritana momba ny vokatra avy amin'ny 12-200MM, araka ny fitaovana fanodinana sy ny mari-pahaizana momba ny vokatra, azafady mifidy ny isan'ny revolisiona mety.
Zahao ny fahamendrehan'ny lavaka fandavahana alohan'ny hampiasana azy;
Atsofohy ny faritra misy ny triangular rehefa apetrakao ao anaty vilia elektrika ny lavaka fandavahana;
Tazomy ny fahamendrehan'ny lavaka fandavahana sy ny tarehy miasa rehefa miasa;
Mampiasà hery kely amin'ny fiandohan'ny fandavahana, ary avy eo ampitomboina tsara ny hery aorian'ny fametrahana azy;
Rehefa miasa dia tsy tokony ho miadana ny fihodinana mba hisorohana ny lelany mikatona;
Raha ny fandavahana afovoany dia mihady ao amin'ilay zavatra, dia tsy mety ny mampiasa hery be loatra mba hisorohana ny sisin'ny lelany;
Rehefa atsofoka tsy an-kijanona, ny soso-kevitry ny fanapahana mangatsiaka dia asaina ampiasaina.
Previous: HSS loaka, tsofa loaka vy, tsofa loaka vy, fantsom-borosy vy haingam-pandeha haingam-pandeha, tsofa fantsom-by
Manaraka: Kitapo lavaka fametahana hazo, tsofa loaka momba ny birao gypsum, tsofa loaka vita amin'ny lovia PVC, tsofa lavaka hazo, fandavahana hazo, fantsona PVS
Saw vita amin'ny seramika vita amin'ny diamondra, fandavahana vera, vera hol ...